कोरोना सोंचेझै भयंकर रै‘नछ, सावधानी अपनाए निको हुन्छ: खेम सेञ्चुरी – Halkhabar kura
५ आश्विन २०७७, सोमबार ०९:१०
कोरोना सोंचेझै भयंकर रै‘नछ, सावधानी अपनाए निको हुन्छ: खेम सेञ्चुरी
काठमाडौं । लोक तथा दोहोरी गायक खेम सेन्चुरीलाई गत भदौ १६ गते कोरोना पोजेटिभ देखियो । हल्का ज्वरो आउने, रुघाखोकी लाग्ने भएपछि उनि हिमालय बिध ल्याव कुपन्डोलमा चेकअप गर्न गए । मन सन्तुष्टिको लागि उनले पिसिआर टेस्ट गराए ।
बिहान टेस्ट गराएर कोठामा फर्केका खेमको मनमा एक प्रकारको द्धन्द्ध चलिरह्यो, नतिजा के आउने हो भनेर ! उनलाई सामान्य रुघाखोकी लागेको थियो, त्यसैले रिपोर्ट नेगेटिभ आउँछ भन्नेमा उनी लगभग ढुक्क थिए ।
सोही दिन साँझ ७ बजेतिर खेम आफ्नै काममा भुलिरहेका थिए । उनको मोबाइलमा घण्टी बज्यो, फोन थियो अस्पतालको ।
खेम : हेल्लो !
अस्पताल : खेमजी तपाईँको कोरोना रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ, नआत्तिकन घरमै आइसोलेसनमा सुरक्षित भएर बस्नुहोला !
खेम : म अस्पताल जान त पर्दैन नि डाक्टर साब ?
अस्पताल : पर्दैन, होम आइसोलेशन नै सुरक्षित छ । घरमै आराम गरेर तातोपानी पिउनुहोला ! व्यायाम पनि गर्नुहोला र खानपानमा पनि बढी नै ध्यान दिनुपर्छ है !
(फोन काटिन्छ ।)
यता खेमको मन मडारिन्छ । उनलाई मरिन्छ कि भन्नेमा डर लागेन । बरु नसोचेको कुरा आइलागेकोमा चिन्ता लाग्न थाल्यो । घर परिवार अर्थात् बाबा–आमाले थाहा पाएपछि के प्रतिक्रिया जनाउनुहोला, साथीभाइको व्यवहार कस्तो रहला, समाजले के भन्ला जस्ता डरले उनलाई सतायो ।
खेमलाई ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, खाना मिठो नलाग्ने र एक्लोपन महसुस हुने जस्ता लक्षण देखिए ।
‘अनेक खाले लक्षण देखिँदा सुरुमा मलाई गाह्रो पनि भएको थियो । खोकीले बोल्नै मिल्दैनथ्यो’, उनले थपे, ‘योगा र व्यायाम गरे, तातोपानी खाइरहे, सकारात्मक कुरा सोच्ने गर्थेँ ।’
खेमलाई सुरु–सुरुमा दालभात खाएपछि भोमिट हुन्थ्यो । पछि बिस्तारै उनले जबरजस्ती भए पनि खाना खान थाले ।
‘धेरैभन्दा धेरै तातोपानी, बेसारपानी, दालचिनी पानी, सुपहरु र तितेपातीलगायत भिटामिन तथा फलफुल खाए’, उनी अनुभव सुनाउँछन्, ‘ज्वरो आउँदा र खोकी लाग्दा औषधी खाए । तर, सबैभन्दा बढी त मैले पोल्ने तातोपानी खाएँ ।’
भदौ ३० गते खेम पुर्ण रुपमा निको भए । कोरोना रिपोर्ट पनि नेगेटिभ आयो ।
‘बाहिर भनिएको जस्तो कोरोना भयंकर रै‘नछ । कोरोनाभन्दा पनि यसबारे फैलाइएको डर, त्रास र हाउगुजी कैयौं गुना खतरनाक छ’, उनी भन्छन् ।
साथीहरुको सहयोगका कारण पनि आफू छिटो निको भएको खेमको तर्क छ ।
‘विनोद भण्डारी, चन्द्र शर्मा, पृथ्वी थकाली र शम्भु कुवँर जस्ता कलाकार साथीहरुको साथ र प्रेरणाले निको भएको हुँ ।’
‘सोंचेझै जिन्दगी रैन’छ’का गायक खेमको जिन्दगीको नसोचेको कुरा आयो । तर, त्यसबाट उनी पार भए । उनी भन्छन्, ‘जिन्दगी साँच्चिकै सोंचेझैं रहेनछ ।’
खेमले अहिले आफू डाक्टरको सल्लाहअनुसार केही दिन घरमै आराम गरिहेको बताए ।
Previous आन्तरिक उडान आजबाट फेरि सुरू, नेपाल एयरलाइन्सले गर्‍यो पहिलो उडान
Next मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै नेकपा, प्रधानमन्त्रीले दिए ३ विकल्प